vendredi, 29 mars 2019 10:04
Toamasina: Fotoam-pivavahana iraisam-pinoana no nanombohana ny fahatsiarovana ny 29 mars
Tontosaina izao maraina izao ao amin'ny fiangonana Katolika Notre Dame, ny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana, ahatsiarovana ny tolom-panafahana sy ireo namoy ny ainy, ary nana-takaitra tamin'ny 29 mars 1947. Tonga maro ireo taranaka mpitolona, ireo sivily sy miaramila, teto Toamasina sy ny manodidina. Niaraka niombom-bavaka tamin'izany ihany koa ny kandida ho solombavambahoaka eto Toamasina I, Irmah Naharimamy sy ireo mpiara-dia aminy. (Jereo Sary Tohiny)
vendredi, 29 mars 2019 09:06
« Isika Rehetra Miaraka amin’i Andry Rajoelina » : Tsy mametraka olana ny HCC
Namoaka ny heviny (Avis n°05-HCC/AV) ny Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana (HCC), ny 28 martsa 2019, manoloana ny taratasin'ny filohan’ny Repoblika, tamin’ny 26 martsa 2019, mangataka ny hevitry ny HCC ny mampety na tsia ny fampiasana ny sary famantarana « Isika Rehetra Miaraka amin’i Andry Rajoelina » amin’ny fifidianana solombavambahoaka ho avy. Nilaza ny HCC fa tsy mifanipaka amin’ny voalazan’ny andininy faha-49 amin’ny Lalampanorenana ny anarana « Isika Rehetra Miaraka amin’i Andry Rajoelina » ary tsy antony tsy hankatoavana ny firotsahan-kofidian’ireo kandida solombavambahoaka atolotry ny vondrona antoko politika mampiasa io anarana io.
jeudi, 28 mars 2019 13:38
Birao fandatsaham-bato: Nitombo 513 ny isany
Ny fanapahana laharana faha-32/CENI/2018 tamin’ny 27 martsa 2019 no nametraka ny isan’ny birao fandatsaham-bato ho 25 365 mandritra ny fifidianana Solombavambahoaka, izay hotanterahina ny alatsinainy 27 mey ho avy izao. Nitombo 513 araka izany ny isan’izy ireo raha oharina tamin’ny fifidianana Filoham-pirenena tamin’ny taon-dasa. Ny fitombon’ny mpifidy voasoratra ao anaty lisi-pifidianana tamin’ny fanavaozana farany teo no anton’io fiakarana io, araka ny fanazavan’ny CENI. Feran’ny lalàna ho 700 tokoa mantsy ny isan’ny mpifidy ao amin’ny birao fandatsaham-bato iray, araka ny andininy faha-125 andalana faha-4 ao amin’ny lalàna fehizoro laharana faha 2018-008 tamin’ny 11 mey 2018.
mercredi, 27 mars 2019 12:26
Propagande prématurée: Rappel aux candidats aux élections législatives
Dans son communiqué en date du 26 mars 2019, la Haute Cour Constitutionnelle a fait un rappel aux candidats aux élections législatives du 27 mai 2019 que la période de la campagne électorale a été fixée par le décret n°2019-059 fixant les modalités d’organisation des élections législatives, du lundi 6 mai 2019 à six heures au samedi 25 mai 2019 à minuit. Que tout usage des moyens de propagande électorale prévus par l’article 92 de la loi organique N°2018-008 relative au régime général des élections et des référendums est interdit avant l’ouverture officielle de la campagne.
mercredi, 27 mars 2019 11:32
Kaominina Ankilivalo - Tsihombe: Tonga namangy ireo mponina ary naka Tsodrano i Masy Goulamaly
Teto amin'ny Kaominy Ankilivalo ny kandida ho Solombavambahoakan'ny Tsihombe sy ireo mpanotrona azy, namangy ireo mponina sady mbola nanamafy ny fangatahana Tsodrano tamin'ireo Olobe an-tanàna. Tonga ihany koa nanangana ny komity mpanohana ny kandida laharana faha 6 eto Ankilivalo Distrikan'ny Tsihombe. Marihina fa ity Kaominy ity dia mbola vaovao, satria i Masy Goulamaly, fony izy Solombavambahoakan'ny Tsihombe teo aloha, no nangataka ny hisian'ny Kaominy roa vaovao, i Behazomanga sy Ankilivalo, ary tonga dia nahazo birao vaovao sy ny fitaovana ao anatiny.
mardi, 26 mars 2019 10:41
Toamasina: Manadio ny tanàna miaraka amin'i Irmah Naharimamy
Mitohy hatrany ny asa ataon'i Irmah Naharimamy, kandida ho solombavambahoaka eto Toamasina I. Manadio ny tanàna eto amin'ny dépôt Anjoma izao maraina izao. (Jereo Sary Tohiny)
lundi, 25 mars 2019 14:44
Toamasina: Manohy ny asa efa fanaony i Irmah Naharimamy
Mitohy hatrany ny hetsika efa fanaon'i Irmah Naharimamy, mitety sy mijery ireo sahirana, mampivondrona ireo tanora, mamporisika ny hanaovana fanatajahan-tena hialana amin'ny fakapanahy amin'ny toaka, sy ny rongony, sady ho fitaizam-batana sy saina. Nanolotra amboara ho an'ireo tanora izy omaly alahady teo amin'ny kianjan'i Ratsimilaho, nanokatra ihany koa ny sampana atletisma, ary io maraina io dia nanolotra vary, biscuit, savony ho an'ireo voafonja ao Ambalatavoangy.Nojereny manokana amin'izany ireo vehivavy izay maro tokoa no mijaly, ary misy aza no mitazona ireo zanany miaraka aminy ao. Irmah Naharimamy moa dia isan'ireo hifaninana amin'ny fifidianana Solombavambahoaka atao ny 27 mey ho avy izao, eto Toamasina I. (Jereo Sary Tohiny)
lundi, 25 mars 2019 09:34
Antananarivo Avaradrano: Niova ny lisitry ny kandida depiote TIM
Araka ny didy (Arrêt n°21-HCC/AR) navoakan’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana ny 22 martsa 2019, araka ny fitoriana nataon’i Andrianatsifonantsara Haja, dia niova ny lisitry ny kandida solombavambahoaka narotsaky ny antoko Tiako I Madagasikara ato Antananarivo Avaradrano, ka Randriambolaina Gerry no mitarika ny lisitra, Andrianatsifonantsara Haja no manaraka azy. Mpisolotoerana kosa Rakotondrasoa Georges sy Rasoamanandraibe Nomena. Raha ny lisitra neken’ny CENI kosa dia Randriambolaina Gerry no mitarika ny lisitra, Ratsimba Julien Tovomampiandriarivelo no manaraka azy. Mpisolotoerana kosa Andrianjafy Christian Olivier sy Fanomboha Raveloson.
dimanche, 24 mars 2019 17:09
Irmah Naharimamy: Sarobidy aminy ny fahasalamam-bahoaka
Nirotsaka an-tsehatra niaraka amin'ny ekipa namono biby kely sy kantsetsitra tamin'ny kartie samihafa teto Toamasina i Irmah Naharimamy, kandida solombavambahoaka ato Toamasina I. Tanàna mando lava i Toamasina, mora iparitahan'ny biby kely, indrindra ny moka, manampy trotraka ny loto sy ny rano mihandrona. Tsy hiandrasana ny fahatongavana eny Tsimbazaza izany fa mila andraisana andraikitra dieny izao, satria sarobidy loatra ny fahasalaman'ny mponina hoy hatrany i Irmah Naharimamy. (Jereo Sary Tohiny)
dimanche, 24 mars 2019 16:20
Manjakamiadana: Afa-pahasahiranana ny mponina
Tapaka tsy azo naleha, ary tena nanahirana ny mponina tety Manjakamiadana Boriborintany faha-2 Antananarivo renivohitra, ity lalankely ity, vokatry ny rotsak'orana nentin'ny andro ratsy. Nandray andraikitra avy hatrany Randrianarisoa Stanislas na Rastany vao nahare io toe-javatra io, fanaony rahateo ny manampy ny mpiara-belona ka nanamboatra ny simba, ary dia vita soamantsara azo ampiasaina indray ilay lalankely ankehitriny. (Jereo Sary Tohiny)